Monday September 08, 2008 - 15:45:25 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Waxaa shalay Maqribkii ku geeriyooday magalada Port Elizabeth Ee wadanka K/Africa Muwaadin Somaliyeed oo lugu magacaabo Abuukar C/laahi Maxamed oo ay Burcad Hubeeysan kusoo weerareen Dukaankiisa uu kuyaalay Tuulo kutaalo Duledka Magaalada Port Eliz
Dilka Abuukar C/laaahi ayaa kuyimid kadib markii uu lakulmay Tuugo Dukaanka Soo weerartay oo kaso baxday Dukaanka Gudihiisa asagoo banaanka kayimid .
Abuukar C/laahi allaha u naxariistee ayeey tuugadii waxay kalahaleeleen wadnaha halxabo oo u ugeeriyooday halka Cismaan Sheikh oo ahaa wiilkii dukaanka kujirayna dhib yer loo geystey.
Dhimashada Abuukar C/laahi ayaa waxaa uu noqonayaa qofkii 6xaad oo ku geeriyoodo Wadankan South Africa Bishan Ramadan Gudaheeda .
Habeenkii khamiista aheed ayeey aheed markii ay kugeeriyoodeen 4 kamid ah Muwaadiniinta Somaliyeed ee kudhaqan wadankan South Africa ayadoo aysan jirin wax masuuliyiinta Dawlada ah oo ilaa hada kahadlay dilka loogeestay Muwaadiniinta Soomalida ah ee lugu layay wadanka Gudihiisa ayadoo aysan ku ekeen dil oo kali ah oo ladhacaayo dhamaan wixii mesha hanti utiilay.
Sidookale waxaa laga soo shegayaa Gobalka Western Cape in loo qaybiyay oo lugu digaayo waraaqo lugu xiraayo dhamaan dukaamada kuyaalo tuulooyinka Gobalka Western Cape Sida ay kusoo waramayaan Goobjoogayaal Karaadsado noolal maalmoodkoda dukaamo ku dhax yaalo xafada ay dagan yihin dadka madowga ah .
Dilka iyo Dhac kajiro wadanka ayaa mudooyinkan danbe kusii saa idayo aydoo anan loo ogalayn in ay qataan qorya sharciyeysan iyo kuwa anansharciyesneen intaba Dadka qaxotiga ah oo anan laheeyn wax ka saacidaayo dhibatada ay ku hayaan Burcada hubeysan ee ku hubeysan qoryaha noocyaha kala gadisan leh.
Waxaan wax kawaydiiyay Muwadin Somaliyed oo lugu magacaabo Maxamed Cabdi Shirre Sababa kaliftay in ay tuulooyinka oo kali ah aadaan maadama ay tahay mesha ugu dhibka badan ee had iyo Goorba lagu laayo dadka sabatay ay u aadan oo ay shaqada ugu radsan ?
Wuxuna iigu jawaabay waa mesha kali ah ee an dhaqaalaha aanwadano kaga shaqeysan karno waayo magaalooyinka waaweeyn waxay rabaan dhaqaalo aad ubadan mana awoodno Maxamed Cabdi Shirre oo ku magic dheer Deer Aflow ayaa wuxu ku nuux nuuxsaday in ay dhamaan muwaadininta Soomaliyeed ka digtoonaadaan La dagaalka dadka shacabka ah oo sababi karo in ay u adeegsadaan
Reported Bymaxamed deeq muuse